Ndị kasị arụpụta, ịrụ ọrụ nke ọma, dara oké ọnụ, na-adaba adaba n'ụzọ iji ofufe bụ site efe efe onwe. Ọ na-na- 20% -arụpụtakwu ihe. N'akụkụ aka nke ọzọ, efe efe azụmahịa na-eduga 40% dobe na arụpụtaghị.
Na onyeisi onwe ugboelu ichata ị na-azọpụta oge n'ihi na, gị ugboelu adịghị ga--ahapụ isi ọdụ ụgbọelu na-enwe-adịghị agwụ agwụ ndioru govanmenti. A onwe ugboelu nwere ike ịpụ a obere ọdụ. E nwere ọtụtụ obere karịa nnukwu ọdụ ụgbọelu.
Naanị otu n'ime ise onwe jets ala na departs si isi ọdụ ụgbọelu. Ọdụ Ụgbọelu na obere okporo ụzọ ijikwa karịa 50% nke onwe jets. 30% ndị a jets apụ apụ abụọ ọdụ ụgbọelu.
Ofufe Mgbe Ị Chọrọ
Na a azụmahịa ụgbọelu, ị ga-agbanwe gị oge na-izute mkpa nke ụgbọelu na-ere. Na onyeisi onwe ugboelu ichata, ọ bụ lurum.
Unmatched ndụ okomoko
The interiors nke a onwe ugboelu na-eju. Ha bụ n'adịghị ihe ọ bụla ị hụrụ. Ụfọdụ jets na interiors mma na ọlaedo na ọlaọcha. Ị nwere ike ịchọta jets na foset ịṅụ plated na 24 carats gold. Ndị ọzọ jụụ ngwa ndị a jets na-agụnye gold sink efere, oche nọdụ ala iri buttons na ukwuu dara oké ọnụ nchekwa belt ngwaike.
The ude nke Society ijiji Private
Nke a na-agụnye Bill Gates, John Travolta, Oprah Winfrey, Jackie Chan, na Tom Cruise. John Travolta nwere iri na otu nzuzo jets gụnyere a Boeing 707. Jay-Z nwere a Bombardier Challenger 850 na, Tom Cruise nwere a Gulfstream IV. Top ụlọọrụ uloru si Google, Microsoft, Coca-cola, na ndị ọzọ na Fortune 500 ụlọ ọrụ ofufe onwe. Obere na ufọt ufọt sized na ụlọ ọrụ ndị ka elu a mma pasent nke onwe ugboelu ojiji. Elu-larịị oru buu igba n'ulo na Hollywood siri na-eji onwe jets. Nka na ụzụ, sales, na ọrụ ọkachamara na-eji nke a mode nke iga.
Ị na-adịghị aka a onwe ugboelu na-enweta luxuries na ùgwù nke na-efe efe onwe. Ị nwere ike n'akwụkwọ onyeisi onwe ugboelu gaa a na-agba ịnyịnya nke ndụ gị.